ODF 1.2 kwadoro dị ka ọkọlọtọ ọhụrụ | Site na Linux
A kwadoro OpenDocument Format (ODF) v1.2 n'oge na-adịbeghị anya dị ka ọkọlọtọ OASIS. Mana nke mbu, ka anyi kowaa ihe OASIS bu:
OASIS (Organizationtù Maka Ọganihu nke Nhazi Ozi Nhazi) bụ nzukọ na-abụghị nke na-akwalite mmepe, ntụgharị na ịnabata ụkpụrụ emeghe maka ọha mmadụ ozi ụwa. OASIS na-akwalite nkwenye nke ụlọ ọrụ ma na-akwalite iji ụkpụrụ emeghe maka njikwa ọdịnaya, igwe ojii kọwaa, azụmahịa azụmahịa, nchekwa, Ọrụ Weebụ, usoro ntanetị, na ngwa ndị ọzọ. OASIS na azịza ya na-ebelata ọnụ ahịa, na-akpali ihe ọhụrụ, uto nke ahịa ụwa, ma na-echekwa ikike nnwere onwe nke nhọrọ teknụzụ. Ndị otu OASIS na-anọchite anya ahịa maka ndị ọrụ gọọmentị na nke onwe ha na teknụzụ, ndị ọrụ na ndị ọhụụ. Ndi mmadu nwere ihe kariri ndi mmadu 5.000 na-anochite anya ndi otu 600 na ndi otu n’otu obodo 100.
Ugbu a, na 5th nke ọnwa a, ndị otu OASIS akwadola ODF (v1.2) dị ka isi na isi nke ntọala a, ntozu kachasị elu nke enwere ike ịnye.
Ndị a bụ ụfọdụ nhota sitere n'okwu nke otu n'ime ndị otu a:
«Ọ na-amasị anyị na e mepụtara ODF site na usoro mmeghe, gụnyere usoro nke nabatara gọọmentị na ntinye ntinye, yana enwere ọtụtụ ngwaahịa na-akwado ODF, yabụ na ọ bụghị nchegbu maka ndị na-enye teknụzụ.. "
«Dị ka nnukwu onye nkwalite ụkpụrụ na-emeghe, FEDICT nabatara ODF 1.2 ma gbaa ndị na-ere ahịa ume ka ha tinye nkọwa a na nyiwe dị iche iche, nke na-ekwe nkwa ụwa niile, ụkpụrụ ziri ezi.«
Nke a ka o kwuru Peter onyekwere, CTO FEDICT, ahụ na-ahụ maka mmepe na mmejuputa atumatu gọọmentị electronic na Belgium.
Site n'ụzọ, iji gosi na nke a bụ ihe dị mkpa, ọbụlagodi ụlọ ọrụ ndị ama ama dịka IBM enyela echiche ha, nke m ga-ahapụ ebe a:
“IBM na-anabata ọkọlọtọ OpenDocument Format ọhụrụ nke akwadoro 1.2. Anyị kwenyere na ụkpụrụ dịka ihe ịga nke ọma dị ka ODF 1.2 bụ ndị ọkwọ ụgbọ ala dị mma nke mmekọrịta mmekọrịta ngwanrọ ma nye ntọala maka nrụpụta ụlọ ọrụ. Mepee ụkpụrụ dị ka ODF 1.2 larịị ebe egwuregwu ma mepụta asọmpi dị elu iji nye ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa ọhụụ ọhụrụ, ọnụ ahịa ego, akwụkwọ ọgụgụ na ntụkwasị obi a pụrụ ịdabere na ya. "
- Angel diaz, osote onye isi oche nke ụkpụrụ emeghe, IBM.
“Dị ka onye nkwado nke OASIS Foundation, Microsoft nwere obi ụtọ ịhụ na a kwadoro ODF 1.2, mmepe nke Microsoft sonyere ma nwee nkwado maka ya. Nke a bụ ihe dị mkpa dị mkpa maka usoro ODF na obodo ODF. »
- Doug mahugh, Onye isi nke ụkpụrụ ọkachamara, Microsoft.
“Nokia nwere obi ụtọ ịhụ nnabata nke ODF 1.2 dị ka ọkọlọtọ OASIS. Anyị na-eji ODF 1.2 na ngwa ụlọ ọrụ anyị nke N9 (MeeGo). Igwe ọfịs mobaịlụ sitere na Calligra, ọrụ mmeghe nke na-emejuputa ODF 1.2, oru ngo anyị enyerela. "
- Frederick hirsch, Onye isi ụlọ ọrụ, Nokia.
Ugbu a, ebe na-atọ ọchị ... "Microsoft" ... WTF !!! I tinyela aka na mmepe nke ODF? _¬
Agbanyeghị, n'oge dị mma maka akụkọ a, naanị ihe na-enye m nsogbu bụ na Microsoft chọrọ ịnara otuto ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » ODF 1.2 kwadoro dị ka ọkwa ọhụrụ
«Ugbu a, na-akpa ọchị ebe…“ Microsoft ”… WTF !!! I tinyela aka na mmepe nke ODF? ¬_¬ »
Fanboyism n'ebe niile D:
Zaghachi ka wasakakero
Ndewo na nke mbụ, ịnabata blog.
Eeh, ọ tụrụ m n'anya na Microsoft na-ekwu na o nyerela ODF aka, mgbe Office 2007 akwadoghị ọkọlọtọ a. Ọ bụghị banyere ịbụ onye ofufe ma ọ bụ na ọ bụghị, kama ọ bụ naanị ihu abụọ.